Hyundai Zhonghe Company dia mavitrika fanatanterahana ny siansa sy ny teknolojia ny fampandrosoana, hatsaran'ny zavaboary, tsena fanitarana, sy ny talenta famoronana ny fanorenana ny efatra lehibe tetikasa, mba manavao Zhonghe Company ho any amin'ny toetr'andro ny fitantanana, marika internationalization, vokatra ny teknolojia, ary ny varotra fanatontoloana . Ny orinasa miezaka ho tonga amin'izao tontolo izao ny mpitarika mpamatsy ny vokatra indostrialy.
"Vita avy any Shina 2025" naroso, manaraka ny "fanavaozana-nandroahana azy tsara aloha, maitso fampandrosoana, ara-drafitra Optimization, talenta-mirona" fototra politika. Shina mpanamboatra 2025, dia tsy azo ihodivirana ny fanodinana sy ny lenta ny orinasa mpamokatra entana ao Shina ny orinasa, ao amin'ny firenena ny fanantenana lehibe, Shandong Qingyun fitaovana milina Hiarovana: Cover Manufacturing Co., Ltd., Shandong Qingyun Modern Qing Tai Spring Manufacturing Co., Ltd., Shandong Central Zavatra tsaina elektrika Manufacturing Co., Ltd., Qingdao Grand Green Wind hery New Energy Development Co., Ltd. Yantai US-Asia Dege Fiarovana ny Tontolo Iainana Teknolojia Co., Ltd., Shandong Hao Xing Tatsu Sodina Fittings Industrial Co., Ltd. miaraka ahitana Shandong Hyundai Sinobo fametrahana mazava milina Manufacturing Co., Ltd. Araka ny amin'izao fotoana izao, hifantoka maharitra. Rehefa heverina ny fifehezana ny bottleneck sy reraka rohy ny orinasa mpamokatra entana fampandrosoana, mampahafaingana ny fanodinana sy ny lenta sy fanatsarana ny kalitao sy ny fahombiazan'ny, ny fototra fifaninanana sy ny fampandrosoana maharitra ny orinasa mpamokatra entana indostrian'ny fahaizany no kokoa. Araka ny marina hahatakatra ny vaovao manodidina ny siansa sy ny teknolojia revolisiona sy ny fiovana orinasa fironana, hanamafy orina fanomanana stratejika ho miankandrefana tarehy fanapariahana, nidina-to-tany fanorenana, amin'ny ho avy fifaninanana mba hibodo ny nandidy havoana. Ny ankehitriny Sinobo orinasa no mitondra ny fampandrosoana ny siansa sy ny teknolojia, tsara marika, tsena fampandrosoana, talenta mba hamoronana efatra lehibe tetikasa, mba hanangana ny orinasa ho maoderina fitantanana, marika internationalization, vokatra fahitana, fivarotana fanatontoloana ny toetr'andro ny orinasa sy miezaka ny ho mpitarika izao tontolo izao orinasa mpamatsy vokatra tsara. Modern Sinobo ny olona ao amin'ny Fanahy ny "mafana, henjana takarina, miakatra" ny finoana, amim-pitiavana handray mpanjifa vao na ny ela ao an-trano sy any ivelany mba hitarika